Isitolo esisha sama-Apple eVienna, e-Austria, kulo uFebhuwari 24 | Ngivela kwa-mac
Isitolo esisha sama-Apple eVienna, e-Austria, kulo Februwari 24
NgoFebhuwari 24, ngokocwaningo olwenziwe ngochwepheshe kulo mkhakha, I-Apple izovula i-Apple Store entsha eVienna, inhloko-dolobha yase-Austria. Indawo ezoba semgwaqweni ophakathi neKärntner Straße, esendaweni yezentengiselwano yedolobha, lapho ezinyangeni ezedlule, i-Apple ivuselele indawo futhi yalungisa isitolo sokuvula.
Lesi sitolo esisha, eduze kwaseStephansplatz, esikhungweni sezinzwa zezwe elinamasu okwandisa eYurophu inkampani yaseCalifornia, sizoba nezitezi ezintathu futhi sithathe indawo esezingeni elifanele ifakwe ngamapaneli engilazi ayinika ukubukeka kwesimanje nokucocekile.
La "Gcina" izokwamukela umklamo omusha okwenziwe ezitolo zokugcina ezivulwe ngumkhiqizo, futhi kuzoba ne-Genius Bar, kanye nezikhala ezanele zezinkulumo nezifundo ezahlukahlukene, konke okuhlobene nemikhiqizo ye-Apple.
Amahemuhemu ngalesi sitolo kade enza ukuthi azwakale isikhathi esingaphezu konyaka (empeleni unyaka owedlule sikhuluma lapha, ngivela kwa-Mac, mayelana nokuvulwa kwalokhu) kepha, ekugcineni, Kuzoba ngoFebhuwari 24 olandelayo lapho ekugcineni singazi isitolo esisha yabafana baseCupertino emgwaqweni omatasa wezitolo waseKärntner Straße.
Ngokuqondile, i-Apple Store entsha ku- IVienna izongena esizeni sangaphambili sesitolo salo mkhiqizo umoya, indawo enkulu ehlangabezana ngokuphelele nokulindelwe yi-Apple. Nakulokhu futhi, i-Apple ibeka uphawu lwayo ezindaweni ezinamasu nezisemqoka zokumaketha.
Ukuvulwa kwangaphambilini nokuvulwa, okuzobe sekuphakeme kokunye ukuvuleka okwenziwe, abathengi abangaba khona bazokwazi ukucela ama-aphoyintimenti ngeGenius bese ubhalisela i-Today emakilasini e-Apple.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Isitolo esisha sama-Apple eVienna, e-Austria, kulo Februwari 24
I-9x19 podcast: I-Apple ishaya amabhuleki
Enguqulweni entsha ye-macOS, ukusebenza kuzobusa ngaphezulu kwezici ezintsha